श्लेष्मान्तकमा कंक्रिट: पशुपति कोष घेराउ- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २२, २०७५ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्रको श्लेष्मान्तक वनमा सिमेन्टको ढलान गरेको विरोधमा सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले बिहीबार पशुपति क्षेत्र विकास कोष घेराउ गरेका छन् । घेराउका क्रममा विकास कोषका कर्मचारी र अभियन्ताबीच भनाभनसमेत भएको थियो ।
विश्वसम्पदामा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत कंक्रिटको ढलान गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ बिहीबार उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै । तस्बिर : अंगद ढकाल
अभियन्तालाई कोषका गार्ड र कर्मचारीले लछारपछारसमेत पारेका थिए । पशुपतिका भण्डारी केदार भण्डारीले बोल्ने क्रममा कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार उप्रेतीले बोल्न रोकेपछि विवाद बढेको थियो ।
यस्ता कुरा के सुन्नु भन्दै उप्रेती उठेर बाहिर निस्कन खोजेपछि अभियन्ताले उनलाई रोकेका थिए । त्यही क्रममा अभियन्ता आस्था थापालाई कोषका गार्डले लछारपछार पारेका थिए । उनी क्यान्सर पीडित हुन् । ‘मलाई क्यान्सर लागेको भन्दा बढी पीडा भएको छ आज,’ उनले भनिन्, ‘मलाई दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारबाही होस् ।’
भण्डारीले बोल्नुअघि प्रदेश ३ का सभासद नरोत्तम वैद्यले बोल्ने क्रममा पनि उप्रेतीले रोकेका थिए । वैद्यले पशुपतिमा राख्न लागिएको सुनको जलाहरी र श्लेष्मान्तकमा कंक्रिट राखेर धार्मिक स्थलमा दुरगामी असर पर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
‘हरेक भगवान्का बेग्लै विशेषता छन्,’ वेद्यले भने, ‘पशुपतिमा चारजना भट्टले बाहेक अरूले छुनसमेत पाउँदैनन् । पूजामा सधैं सहयोग गर्ने भण्डारीले समेत छुन पाउँदैनन् । त्यस्तो मन्दिरमा कसले राख्ने जलहारी ? शिव आफू मृगको छालामा नागै बस्ने देवता हुन् । यस्ता देवतालाई यस्तो जलहरी किन चाहियो ? जे पनि निर्णय गर्ने ? तपाईंहरू राजा हो ? हामी रैती हो ? जनताको सल्लाह लिनुपर्दैन यस्तो आस्था केन्द्रमा नयाँ काम गर्दा ?’
कोषले परिपथ बनाउने भन्दै दुई सातादेखि श्लेष्मान्तकमा कंक्रिट राख्दै आएको थियो । कोषका अनुसार मृगस्थली क्षेत्र घुम्न सजिलो होस् भनेर पर्यटक घुम्ने बाटो बनाउन लागेको बताउँदै आएको थियो । २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर यहाँ ‘वाक वे’ बनाउन लागेको थियो ।
यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि विभागले स्थलगत अध्ययन गर्न टोली पठाएको थियो । विभागका अनुसार ७० मिटर लामो र ४ मिटर चौडाइको बाटोमा ढलान गरेको छ । भण्डारीले गुरुयोजना बनाउने भन्दै धमाधम काम गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
‘गुरुयोजनाअनुसार पो काम गर्नुपर्‍यो त । दाताले दियो भन्दैमा धमाधम काम गर्ने ?’ भण्डारीले भने, ‘मृगस्थलीमा मृगलाई खुवाउने पानीसमेत छैन । विश्वरुपा छेउमा लास गाड्ने ठाउँ बनाएको छ । लास गाडेको समेत पैसा लिन्छ । कोष व्यापार गर्न आएको हो ? हाम्रो धर्म, संस्कृति मास्न आएको हो कि जोगाउन आएको हो ? ’
पुरातत्त्व विभागले कंक्रिटका सबै संरचना भत्काउन लगाउने जनाएको छ । पहिला बनाउन दिने अनि भत्काउन लगाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको नाश भएको भन्दै सम्पदा अभियन्ताले आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामीले रानीपोखरीमा सम्पदा मास्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेलाई फौजदारी मुद्दा लगाएका छौं,’ सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीले भने, ‘यहाँ पनि सम्पदा मास्नेलाई हामी छाड्ने छैनौं । तयार भएर बस्नुहोला ।’
कोषले कंक्रिट ओछ्याएको क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले पनि अवलोकन गरेकी छन् । उनले भुइँचालोले क्षतिग्रस्त विश्वरुपमा मन्दिर, त्यहाँका सत्तल लगायत निरीक्षण गरिन् । ‘यहाँ कंक्रिट ओछ्याएर बाटो बनाउनुभन्दा विश्वरुपाको मन्दिर बनाएको भए हुन्थ्यो,’
खड्गीले भनिन्, ‘वनमा यसरी कंक्रिट ओछ्याउनै हँुदैन । यो विषयमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । पशुपति क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पनि महानगरमा बोलाएर छलफल गर्छु । सम्पदालाई मास्ने काम कसैले गर्नुहँुदैन । यो घटनाले मलाई धेरै संवेदनशील बनाएको छ ।
महानगर वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष दिनेश डंगोलले जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नदिई कोषले आफूखुसी निर्माण गरेको बताए । ‘स्थानीय सरकारको अधिकार के हो ? कोषले यता ध्यान दिएको छैन,’ उनले भने, ‘कोषले स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर काम गरिरहेको छ । अब हामी यस्तो गैरकानुनी काम हुन दिँदैनौं । कोषले गर्ने हरेक कामको निगरानी राख्छौं । यस्तो गर्दै गयो भने हाम्रो महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाइदिने खतरा छ ।’
कोषले विश्वरुपमा अगाडि १ सय ७० मिटर क्षेत्रमा सिमेन्टको ढलान गर्ने काम सकेको छ । ढलानमाथि ढुंगा ओछ्याउने काम भने रोकेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०९:२४
नयाँ संहिता लागू भएको १५ दिनमा २५ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा, जसमध्ये पुरुषका १३ वटा
भाद्र २२, २०७५ प्रताप विष्ट
हेटौंडा — मकवानपुर भीमफेदी २ का सुरेन्द्र मोक्तान अहिले पत्नीसित सम्बन्धविच्छेदको कानुनी प्रक्रियामा छन् । तीन वर्षदेखि पत्नी अलग बसेकाले सम्बन्धविच्छेदका लागि उनले जिल्ला अदालत मकवानपुरमा भदौ ३ गत उजुरी दर्ता गरे ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका १७ का २५ वर्षीय शर्मा थरका एक युवकले पनि भदौ ८ गते सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दिएका छन् । पत्नी घरभन्दा बढी माइती बस्ने गरेको, घरव्यवहार प्रतिजिम्मेवार नभएको र नगद सम्पत्ति हिनामिना गरेकाले अलग हुन चाहेको शर्माको जिकिर छ ।
भदौ १ गतेदेखि मुलुकमा नयाँ संहिता लागू भएको छ । नयाँ संहिताले सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषलाई पनि महिलासरह अदालत जान सक्ने बनाएको छ । यो व्यवस्था लागू पछि मकवानपुरमा सम्बन्धविच्छेद गर्न कानुनी उपचार खोज्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउने पुरुषको संख्याले महिलालाई उछिनेको छ ।
नयाँ संहिता लागू भएको १५ दिन (भदौ १५ सम्म) जिल्ला अदालत मकवानपुरमा २५ वटा सम्बन्धविच्छेदका उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये १३ पुरुषले उजुरी दर्ता गराएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेद गर्न एक जना पनि पुरुष अदालत गएका थिएनन् ।
‘सम्बन्धविच्छेदका बारेमा अदालतमा बुझ्न आउने पुरुषको संख्या बाक्लै छ,’ अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘महिलाको कारणले पुरुषहरू थिचोमिचोमा परेका रहेछन् क्यारे, त्यसैले बुझ्न आउने र उजुरी दर्ता गर्ने पनि बढी नै छन् ।’ पहिले महिलाका तर्फबाट सम्बन्धविच्छेदको उजुरीको ओइरो लाग्थ्यो ।
गत आवमा अदालतमा महिलाहरूकोतर्फबाट सम्बन्धविच्छेदको ४ सय १ थान उजुरी परेका थिए । तीमध्ये २ सय ९१ वटा मुद्दा फैसला भएको जिल्ला अदालत मकवानपुरले जनाएको छ । नयाँ देवानी संहिताको भाग ३ को परिच्छेद ३ मा सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा महिलाका लागि भएका व्यवस्था पुरुषका लागि पनि राखिएका छन् ।
यसपछि पत्नीसरह पतिले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने भएका हुन् । लगातार तीन वर्ष बेखबर बाहिर बसेमा, अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा, शारीरिक र मानसिक हिंसा गरेमा पत्नीविरुद्ध पति अदालत जान सक्छन् ।
पत्नीले अरू कुनै परपुरुषसित यौनसम्बन्ध राखेको अवस्थामा पनि सम्बन्धविच्छेद हुन सक्छ । ‘समानताका नाममा कानुनले पुरुषको सम्बन्धविच्छेद खुकुलो बनाएको छ,’ अधिवक्ता मदन दाहालले भने, ‘यसले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पुरुषहरूको संख्या अदालतमा बढेको हो ।’
विगतमा स्वतन्त्र हुने नाममा ससाना मनमुटावमा पनि पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने क्रम बढेको छ । विवाह भएको वर्ष दिन नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद गर्ने युवाहरूको जोडी पनि छ । गत आवमा जिल्ला अदालत मकवानपुरमा विवाह गरेको ११ महिना पनि नपुग्दै ३ जोडीले सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला अदालत मकवानपुरमा ६० वर्ष पार गरिसकेका वृद्धले पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०९:२२